Dreams from my father: 2009
Obama,,, you says dreams from your father. I allso have alot of dreams from my father,It is that process I wish to beapart of....
ငါ ချစ်သူ အိမ်ရှင်မ
အိမ်ရှင် မ စရာမရှိလို့
Posted by kohan at 7:27 AM 10 comments: Links to this post
Posted by kohan at 9:19 AM4comments: Links to this post
Posted by kohan at 1:14 PM5comments: Links to this post
အဲဒီမြေမှာ ငါ မွေးတယ်
Posted by kohan at 11:39 PM 10 comments: Links to this post
Posted by kohan at 9:48 AM 13 comments: Links to this post
Posted by kohan at 12:14 PM7comments: Links to this post
၂၁ ရာစု “မှန်”
အရင်က “မှန်” တွေအားနာတယ်....
Posted by kohan at 2:58 AM 12 comments: Links to this post
၇ ရက်နေ့ကမတွေ့ဘူးလိုက်တဲ့ နှင်းနဲ့မာယာ ရဲ့တက်ဂ် ကိုရေးပါတယ်........
ကိကီ ရေးသွားတာ ကျနော့်ကဗျာထက်ဖက်ကောင်းနေတာနဲ့တင်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာ.....:P
လုပ်တော့ ညစ်၏ ။
Posted by kohan at 1:42 PM 13 comments: Links to this post
နှင်းဆီတဲ့....... တော်တော်များများကဗျာဆန်ဆန်သုံးလေ့ရှိကြတဲ့ ပန်းနာမယ်ပေါ့..၊ ဒီနေ့လဲ အဲဒီနှင်းဆီဆိုတဲ့ ပန်းနာမယ်ကို ခေါင်းထဲရောက်လို့နေတယ်..။ ငယ်ငယ်က အလွတ်ရခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုလဲ အမှတ်ရတယ်..။ ရေးသူဘယ်သူဆိုတာကို မသိပေမဲ့ ငယ်ငယ်က အလွတ်ကိုရခဲ့တာလေ..ကိုယ်ခံစားရတာနဲ့တူလွန်းတာကြောင့်ပေါ့ ။အခု လက်ရှိ ကိုယ့်အခြေအနေလေးနဲ့လဲယှဉ်တွေးမိတယ်..။ပေါင်းမသင်လို့မရှင်သန်တာလား တကယ်ပဲသြောဇာဖျင်းလို့ အပင်မသန်တာလား..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ.........
Posted by kohan at 12:24 PM3comments: Links to this post
Posted by kohan at 6:18 AM9comments: Links to this post
မိုးခါးရေ လေးနဲ့ ၀ိုင်းဖွဲ့လို့....
( ၀က်ဝံလေးအတွက်ရေးပါသည် )
Posted by kohan at 11:26 AM 10 comments: Links to this post
ကျနော် ဒီ ဘလော့ဂ် တွေဘာလို့ကြိုက်သလဲ ?
ကျနော့်ကို သက်တန့်ချိူက တဂ် ထားပါတယ်ဆိုလို့ ဒီ ပို့စ်လေးရေးဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်ကြိုက်တဲ့ စာမျက်နှာလေးတွေအကြောင်းပါ..၊ အကြောင်းအမျိူးမျိူးနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတန်ကြာကမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ ဘလော့ လေးပြန်လုပ်ဖြစ်တဲ့ အခါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာမျက်နှာလေးတွေကို ကိုယ့် နေရာမှာ လင့်ထားဖြစ်ပါတယ်..၊
မထမဦးဆုံး ရေးလိုတာက ( မိုးလှိုင်ည ) ရဲ့ စာမျက်နှာပါ..၊ သူ့ဆီကိုမကြာခဏကိုသွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးပုံဆန်းတယ်...။ သူ့ကဗျာလေးတွေကိုဖတ်ရတာ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ ခရေပွင့်ကောက်ရသလို ရသ ကိုရပါတယ်.၊ အဲဒီရသကို ခရေပွင့်ကောက်ဘူးသူတိုင်း ခံစားဘူးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကိုကြိုက်တတ်တဲ့ ကျနော်သဘာဝအရလဲ သူ့ကဗျာရေးပုံ က ကျနော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လို့ လေ့လာသင်ယူစရာလဲဖြစ် ငေးမောစရာလဲဖြစ် ဒါကြောင့်မို့အမြဲသွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ..။
နံပတ်နှစ် က ကို ( အောင်သာငယ် ) ပါ သူ့ကဗျာတွေမှာ အားပါတယ်လို့ကျနော်ယူဆပါတယ်..၊ သူ့ဆီက စာ သို့မဟုတ်ကဗျာတစ်ခုခုကိုဖတ်လိုက်တိုင်းတွေးစရာလေးတစ်ခုပေးတတ်ပါတယ် ၊ တွေးရတာကြိုက်တဲ့ ကျနော်အတွက်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ အဲဒါကြောင့်ပဲ အမြဲသွားဖတ်ဖြစ်ပါတယ်...။
သုံး က မ( ကီကီ ) ပါ ၊ ဇောက်ထိုးတွေရေးတတ်လို့ကြိုက်တာပါ ၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဇောက်ထိုးအတွေးများတော့ အကြိုက်ချင်းတူတဲ့သဘောပေါ့ ....၊
လေး က သက်တန့်ချိူ ပါ သူရေးခိုင်းလို့သူကိုကြိုက်တာမျိူးမဟုတ်ပါဘူး ၊ ကျနော်ခဏခဏသွားတတ်လို့ သူကလဲ ဘာဖြစ်လို့လာသလဲဆိုတာကိုသိချင်ပုံရပါတယ် ၊သူ့သက်တန့်က တက်ရတာ သက်တန့်ဆိုတဲ့အတိုင်း ခက်ပေမဲ့ သွားသွားကြည့်ဖြစ်ရချင်းအကြောင်းအရင်းက ၊ အဆင်အပြင်လေးက ကလေးဆန်ဆန် ပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးတွေရေးတတ်တာကြောင့်ပါ..၊ ပူးကလေးတွေကိုအစာကြွေးပါဦး ငါးလေးတွေလဲရှိတယ်စသဖြင့်တွေကြားမှာ အသုံးမ၀င်ချင်း ဆိုတဲ့ ကဗျာမျိူး ရှိနေတာ ကျနော် မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကိုခရီးသွားခဲ့စဉ် က မြင်းချံမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ( ထမင်း နဲ့ ဘိလတ်မြေ ) ဆိုတဲ့ ထမင်းဆိုင် တစ်ဆိုင်ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ဖတ်ရသလို ထူးချားနေတာတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ ကျနော့်အတွက် အချိန်မှန်သွားရမယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် အဲဒါကြောင့်အသစ်တင်တိုင်းသွားဖြစ်ပါတယ်..၊
ငါး က ( ကဗျာတွေနဲ့ လေပြေ) ပါ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကဗျာရေးတတ်တဲ့ စာမျက်နှာတိုင်းကို ကျနော် သွားကြည့် ဖြစ်မြဲပါ ဒါပေမဲ့ သူမှာ ထူးချားတာက ငါ့အိမ်မက် ငါ့စိတ်ကူးနဲ့ ငါစာပေငါရေးမည် ဆိုတာက နဲနဲလေး အလေးသာသွားအောင်ကျနော့်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်ပါတယ်....၊
အဲဒါက ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ငါးခုပါ နောက်ကြိုက်တာတွေကိုတော့ ကျနော့်စာမျက်နှာပေါ်မှာ လင့်ထားတွေကြည့်ပီး သိနိုင်ပါတယ် ကျနော်ကြိုက်တဲ့ စာမျက်နှာတွေကိုပဲ ရွှေးလင့်ထားတာဖြစ်လို့ အဲဒါတွေက အမြဲ ဖတ်ဖြစ်တာတွေပါ ၊
လင့်မလုပ်ထားပေမယ့် အမြဲသွားဖြစ်တဲ့နေရာတွေလဲ အများကြီးပါ အကြောင်းကြောင်းတွေနဲ့ပေါ့.........။
ကိုသက်တန့်ချိူ ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ( ကျနော်မြင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးထားတာဖြစ်လို့ အနှောက်အယှက် ဖြစ်တာမျိူးများပါခဲ့ ရင်ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ် အားလုံးကိုတောင်းပန်တာပါ )
Posted by kohan at 4:25 AM3comments: Links to this post
၁၉၈၀ မှာ ငါ
ငါ တစ်လုံးကို အခါခါ ရွတ်ပြီး
( ရှင်မ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးလေးက မောင်ခိုင်မာ (ဦးကြည်ခိုင်) အလွမ်းပြေပေါ့ဗျာ )
Posted by kohan at 9:07 AM7comments: Links to this post
အမှတ်တမဲ့ တောင်းမိတဲ့ ဆု
ရေးသူ ( ကိုဟန် )
Posted by kohan at 2:16 AM6comments: Links to this post
အခုတစ်လော ဘလော့ဂါတွေတော်တော်များများ က ( အခုတစ်လော ) နေကြတယ်လေ ။ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ အခုတစ်လောပါဦးဆိုလို့ ခတ်မှီသွားအောင် အခုတစ်လော လိုက်ပါတယ်
ကျနော်တော့ အဲသလောက်ပဲ " လော " တော့မယ်ဗျာ သိပ်လဲထူးထူးထွေထွေမရှိလို့ပါ မေးလ်ပို့ကြသည့်ရောင်းရင်ကြီးများ ကျေနပ်ပါနော်...
Posted by kohan at 1:37 PM5comments: Links to this post
Posted by kohan at 8:39 AM 1 comment: Links to this post
ဒီတောထဲမှာ ကျားဖြစ်နေရတာ အချားဘာပြသနာမှမရှိဘူးဗျာ..၊ တစ်ခုပဲ ကျူပ်လိုက်ထားတဲ့ အမဲ နောက်နေ့စာချန်ရတာစိတ်မဖြောင့်ဘူး ဘာလို့လဲသိလား..။ ပြောရမှာလဲရှက်စရာတော့ကောင်းတယ် .၊ ကျူပ်ကကျားလေ..။ ကျူပ်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာ ကြွက်ကလေးတွေဗျာ ၊ အုပ်စုတောင့်ရင်အသံဆူ သူများတကာဇွဲနဲ့ နဘဲနဲ့ လိုက်ခဲ့တဲ့ အမဲ ဒင်းတို့လေးတွေက နောက်နေ့စာတောင်ချန်မရအောင် အပြောင်နိပ်နိပ်သွားလိုက်တာ ရင်နာလို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူး ၊
ကျားကဖြစ်နေပြန်တော့ သေးသေးမွှားမွှား အကောင်ငယ်တွေလဲ အကူအညီမတောင်းရဲ ၊ ရှိတဲ့ အခက်အခဲ ဒီတိုင်းရင်ဆိုင်ရတာလဲ အောင့်သီးအောင့်သက် ၊ ကဲ သိက္ခာအနည်းငယ် ကျလိုကလဲ ကျစေတော့ ၊ အကောင်သေးပေမယ့် အမဲလိုက်ဖော်တော့ဖြစ်တဲ့ မြေခွေးကိုဘဲပြောကြည့်ရမှာဘဲ မြေခွေးရယ် ငါဂူထဲမှာကြွက်တွေသောင်းကျန်းလိုက်တာ တစ်ခါတစ်ခါ ငါစားစရာတောင် မကျန်ဘူးကွာ ၊ ဒီအကောင်တွေကို ဘယ်လိုနိပ်ကွတ်ရမယ်ဆိုတာ မင်းမှာများ နည်းလမ်းရှိရင် ငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါကွာ ၊ မြေခွေးသူပေးတဲ့ အကြံကလဲ အဆိုးကြီးတော့မဟုတ်လှဘူး ကြွက်ကိုနိုင်တာကြောင်ပါတဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ဗျာ စဉ်းစားကြည့်စမ်းဘာ ၊ ကျားတစ်ကောင်လုံးဖြစ်ရက်နဲ့ ကြောင်ကိုအကူအညီတောင်းရမှာ ဘယ်မှာမျက်နှာဘန်းလှပါ့မလဲ နော် ၊ နေပါစေတော့ဗျာ အမဲလိုက်ရင် ကြွက်စာပါကျန်အောင် ပိုရှာလိုက်ပါတော့မယ် ၊ နားညီးရင်လဲ ကြီတ်မှိတ်အိပ်ရမှာဘဲ ကျူပ်က ကျားကိုဗျ နော်......
Posted by kohan at 8:33 AM No comments: Links to this post
ဒီကဗျာကိုရေးတဲ့သူ နောင်မင်း(ထီမန်)ဆိုတာ... ကျနော့် အကိုတစ်ဝမ်းကွဲ စိတ်လဲတူသူ . ကိုယ့်မှာတစ်ရာရှိ သူများစာအတွက် ကိုးဆယ်ဖယ်ရင်း လုံးချာလည်တာချင်းလဲတူ....။အလုပ်ကြီး နှစ်ခုလုပ် တစ်ခုခွဲက အရှုံးပေါ်တာချင်းလဲတူ...၊ မွန်းကျပ်တဲ့ မြို့ပြကထွက် လပ်ဆပ်နေသေးတဲ့ ထီမန်တို့ရဲ့ ရွာကလေးမှာ ကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ အရက်ကိုသောက် မှုးပြီး မှောက်ခဲ့တာချင်းလဲတူ...။ ကြွေယူပြုံးပြုံးတောင်းရင်မုန်းဆိုလို့ ကိုယ်ပေးပြီးသားအကြွေး စာရွက်နဲ့တောင်ရေးမတောင်းဘဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြွေးတောင်းသူဖြစ်အောင် မူရာမာရာများရတာချင်းလဲ တူ..... ဘိုချစ်ရေ တူတူလျှောက်တဲ့တောကြီးတန်းက ဗွက်ထတဲ့လမ်းကို လွမ်းသဗျာ.........သူပို့လာတဲ့ မေးလ်ပေါ်က စာလေးပါ ဖော်ပြလိုက်တယ်နော်
by 90s decay.....my family face with the crisis.....and.. i shared my parent's pressure...i think ...this poem..(father and the shot cheroots)....change my style....(instead of nursery style)....i can't type PC keyboard layout....just type MAC layout..so i change pdf format....be happy..man
ဟို အနှစ် လေးဆယ်လောက်တုန်းက
မနက် မနက် ရောက်တိုင်း
အဖေ ညက သောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးလိပ်တိုတွေ
ငြူစူလို့ မရတဲ့ တာဝန်လေ
ည ည ဆို
Posted by kohan at 3:44 PM3comments: Links to this post
Posted by kohan at 3:39 PM No comments: Links to this post
ရိုင်းတယ်ထင်ရင် ခွင့်လွတ်ပါ တစ်ခါတစ်ခါ တကယ်ကို အဲသလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံစားရတာပါ...။ အမိမြေကို စွန့်ခွာ ငွေရှာရတဲ့ သူတိုင်းကျနော့်လိုပဲ ခံစားဘူးမယ်ထင်ပါတယ်..။
ဖာသယ်က ဘာရောင်းပါသလဲ ဟင်....
Posted by kohan at 3:15 PM 1 comment: Links to this post
ကျိုးပျက်သွားတဲ့ ခုံတွေကိုကြည့်ပီး သတိရတယ်..။ မမြည်တော့တဲ့ခေါင်းလောင်းကိုသတိရတယ်...။ တိုက်ပုံမပါတော့တဲ့ ဆရာကိုသတိရတယ်...။အားလုံး...အားလုံး.....အားလုံး......
Posted by kohan at 2:25 PM No comments: Links to this post
ကျနော့် ဖေဖေရေးခဲ့ တဲ့ ကဗျာပါ...။ 1991/92 လောက်က အလင်းထောင့် စာပေဂျာနယ်မှာဖော်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်..။ အဲဒိတုံးက ကျနော် ကခလေးပေါ့..၊ သေသေချာချာသဘောမပေါက်ပါဘူး..။ နဲနဲကြီးလာမှပဲ ကိုယ့်အဖေရဲ့ ဘ၀ ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လို့ခံစားမိလာတာပါ..။သူနဲ့ကျနော်ကြားမှာ သဘောထားမတူတာတွေအများကြီးပါ..။ အထူးသဖြင့်ငယ်ငယ်ကပေါ့..။တန်ဘိုးရှာတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်မှ သူ့ရဲ့ တန်ဘိုးကိုကျနော်ရှာတွေ့ပါတယ်..။ သြော်သူ့ဆီမှာ ကျနော်ဖြစ်ချင်နေတာတွေအများကြီးပါလား.....။ ကျနော်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ သူ့ဆီက ကျနော်ဖြစ်ချင်တဲ့ အပိုင်းအစတစ်ခုပါ... မျှဝေလိုက်ပါတယ်......
ဦးထုပ်မပါ ၊ ဖိနတ်မပါ ၊
င်္အကျီမပါ ၊ ပုဆိုးမပါ
မီးပွား ၊ မီးပွင့် ၊ မီးတောက်..၊
ကျော်၏ ၊ ခွ၏ ၊ လဲ၏ ၊ ပြို၏....
သူ့လဲငါမသိ ၊ ငါ့လဲသူမသိ
ငါ စကောလားရှစ် ဘွဲ့ရ၏.....
(ခြောက် (က) )သွေးနထင်ရောက်
(ခြောက် (ခ) )
ကျားသံမပေါ် မီညောင် ဟစ်တယ်လေ့
ရင်ထဲမှာ ဘိက်ဘိက်သား ညိုဆဲ
မရဲ တရဲ တစ်ယောက်ထဲပင်
ပြာတာကပြာ ၊ နီတာကနီ.
ဟိုဒီ အလည်အပတ်တောင်ပံခတ် ၊ နဂါးဝါ
ငါ ဆိုသည်ကား အသေးစားအမှုန
ညထ ၊ နေ့အိပ်
သတင်းစာပေါင်း ၃၆၅ စောင်ကို
ဟားရတယ် ၊ ဟာဒရ ရတယ်
သူခေါ်လာတဲထဲက ကျနော်က သုံးကောင်မြောက်ပါ ရတနာခဲလား မီးသွေးခဲ လားတော့မသိ.........:p
Posted by kohan at 4:32 AM2comments: Links to this post
ကျနော်ချစ်သော မိန်းမများ (တစ်)
နွေသည်ပူပြင်းသည်ဟုဆိုလျှင်ရယ်ကြပေးဦးမည်..။သို့သောထိုနေ့ကအမှန်တစ်ကယ်ပင်ပူပြင်းပါသည်..၊ အချိန်အားဖြင့် မာရစ်ဇ ၏ ဆံပင်ရှေရှေ အရပ်မြင့်မြင့်သီချင်းခတ်စားနေချိန်..၊ ကျနော် ဇာက်လိုက်ကျော် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ၊ မိန်းမတို့ ၏ ရှိက်ဖိုကြီးငယ်အသွယ်သွယ်တို့ကို ရိုးသားစွာရင်ခုန်တတ်စ ၊ ( ယခုကဲ့သို အလွန်တရာမှ ယဉ်ကျေးလှသော အနောက်တိုင်းသားတို့၏ ဖိုမဆိုင်ရာနည်းမညာများကို မလေ့လာရသေးခင်) ဆင်စွယ်ရောင်ဖောရိန်းရှပ် လှလှလေးဖြင့်သူမအားကျနော်စတွေ့ဘူးခဲ့ပါသည် ၊ သူမ၏ ဆင်မယဉ်သာလမ်းလျှောက်သွားပုံသည် သူမ၏ ခြေအစုံတို့တွင် ကျနော့် နှလုံးသည်းအိမ်တို့ ၇စ်ပတ်ပါသွားသရောင်…။ (ယခုအချိန်တွင် ဆင်မတစ်ကောင် လမ်းလျှောက်ပုံကိုနောက်မှ မြင်ဘူးသော်လည်း ဆိုရိုးစကား ရှိခဲ့သည်မို့ ပြင်ရန်နောက်ကြပေပြီ အတော်ပင်ကြည့်ရဆိုးပါသည်) သောက်လက်စ လက်ဘက်ရေခွက်ကိုပင် မချပဲ ဆက်တိုက်ငေးကြည့်နေမိသည်အထိ….၊ ခွက်ပြန်ချလိုက်ပါကပေးလိုက်ရမည့် စားပွဲခုံကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရမည့် အချိန်ကိုပင် နှမျောနေမိသည် ..၊သူမ အမှန်တစ်ကယ်ပင်လှပါသည်..၊သူမ ၏နောက်ကျော ကိုပျောက်သွားသည်အထိငေးကြည့်ရင်း လှပသောသူမ၏ မျက်နှာသည် ကျနော်၏ လက်ဘက်ရေခွက်ထဲတွင် ၄င်း စားပွဲခုံပေါ်တွင် ၄င်း ကျနော်တတ်ထားသည် မျက်မှန်၏ မှန်များတွင် ၄င်း ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်လျှက်….၊ပျောက်ကွယ်သွားပြီး တော်တော် အကြာမှ စားပွဲခုံပေါ်သို့ လက်ဖက်ရေခွက်ကို ပြန်အချ..တိုးညှင်းသော ဆိုင်းထီးဆိုင် ၏တေးသွားက ကျနော့် ကိုနွေးထွေးစွာ လာရောက်ပွေ့ဖက်သည်….. (အမှောင်တစ်ညမှာ….မြင်ရခဲတဲ့ မောင့်….လပြည့်ဝန်း) ဟုတ်ပါသည် အမှန်ပင်မြင်ရခဲ့လှသော ဟိုဖက်ကုန်းလေးတစ်ဘက်တွင်ပြောက်ကွယ်သွားသော မောင့် လပြည့်ဝန်း ထိုအချိန်မှစ သူမကို ကျနော် တစ်ဘက်သက် ကင်ပွန်းတတ်ခဲ့သည် ကျနော့် ရဲ့ လပြည်ဝန်း……၊
ဆယ်ကျော်သက်တို့ ၏ရင်ခုန်ခံစားချက်မှ ပင်လယ်ထဲရေငတ်သည်နှင့်အလားတူလှသည်….မျက်စေ့ရှေ့အောက်ထိုလောက်များပြားလှသော မိန်းခလေး အများအနက်မှ လပြည့်ဝန်းကိုသာ ထပ်ခါထပ်ခါမြင်ချင်နေမိသည်..၊ မြင်ပြန်တော့ လဲဘာမှမဟုတ် ကြည့်ရရုံသာ ၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ ကျနော်ထိုခဏကို ချိူမြိန်လှသည်ကတော့ အမှန်၊ နေ့တိုင်းလို လို လပြည့်ဝန်းလာတတ်ရာ လမ်းဘက် မျက်နှာမူပြီး လက်ဘက်ရေတစ်ခွက်နဲ့ ထိုင်စောင့်တတ်လာသည်..၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဆိုင်ရှင်ညိုငြင်သည်အထိပင်.သူမလာပြီဆိုတော့ လဲ (သတိ ပေတရာအကွာတွင် အချစ်ရှိသည် ) ဟုဆိုရလောက်အောင်ပင် နောက်ခပ်ခွာခွာက တစ်ကောက်ကောက်လိုက် ၊ကိုယ့်ကို ထိုအချိန်က ဘာစိတ်ကူးနှင့်ဘာလိုက်လုပ်မှန်းကိုမူ ယခုအထိမသိသေးပါ..၊ထိုသို့ပင် နာမယ်လဲမသိမိတ်လဲမဆက်ဖြစ်ပြုံးလဲမပြဖြစ်နောက်ကတစ်ကောက်ကောက်လိုက်ရင်းကိုယ့်
ဖာသာ အိပ်မက်ထဲမှာ လမင်းတစ်ရာသာနေလိုက်တာ တစ်လခန့်ကြာခဲ့မည်ထင်၏.၊
ခလုပ်တိုက်ပါများ သည့် ငုတ်မှတ်မိလာသလိုပင် ကြာလာတော့ သူမကျနော့်အား မှတ်မိလာပုံရသည် ၊တစ်ရက်သော တနင်ဂနွေ တွင်သူမကျနော့် အားပြုံးပြခဲ့သည် ၊ငေးကြည့်နေသော ကျနော့်ကို စေ့စေ့ ကြည့်ပြီး ပြုံးပြလိုက်သောသူမကိုကျနော်တော်တော်အံ့အားသင့်သွားခဲ့သည် ၊နောက်သို့ပင်ရုတ်တရက်လှည့်ကြည့်မိသေးသည်၊ကျနော်မဟုတ်ပါပဲ တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ ပြုံးပြနေချင်းလော….၊ မဟုတ်ပါ ကျနော်မှ ကျနော် ကျနော့်အားပင်တည့်တည့်ပြုံးပြနေချင်းဖြစ်ပါသည်..၊စကန့်မဆိုင်း ကျနော် ကဗျာကရာပင် ပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်..။ အလောတစ်ကြီး ပြုံးပြမိခြင်းကြောင့် ပါးစပ်မှာတတ်ရက်သားရှိနေသော ဆေးလိပ်တိုကိုပင်မထုပ်မိ…။ ဆေးလိပ်တိုက ပုဆိုးပေါ်သို့တစ်ရှိန်ထိုးကျ..၊ ပုဆိုးအားတစ်ငွေ့ငွေ့ မီးလှောင်သည့်အထိပင်ကျနော်မသိနိုင်သေး ၊ သူမ၏ လှပသောအပြုံးမှ တစ်စကန့်ပင်မဖယ်ခွာလိုပြီ..၊ပုဆိုးပေါက်ပြီး ပေါင်အားမီးဖြင့် ထိုးမိကာအတော်ပူလာမှပင် ထခုံမိသည်..၊ရှေသော ကျနော့်၏ဒူးခေါင်းက စားပွဲခုံကိုတိုက်မိ ၊ရေနွေးအိုးကမှောက် လက်ဘက်ရေခွက်ကမြောင်းထဲရောက်.. ရေနွေးအိုးထဲမှ ရေနွေးပူပူများ ပုဆိုးပေါ်သို့ကျ ရွဲစို..။ကျနော်နှင့် စားပွဲခုံ တစ်ဝိုက်သည်(ဘက်ကဒက်တွင်ဗုံးကြဲပြီးနောက်) ဆိုသောသတင်းဓာက်ပုံထဲကလိုပင် တစ်ခဏအတွင်း ကဗျောင်းကဗျင်..၊
အားလုံးပြီးဆုံးကာမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်မိတော့ လား..လား ဆေးလိပ်မီးနှင့်ထိုးမိထားသောပေါင်မှ ပူလောင်နေသည်.၊ ပုဆိုးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးသည် ရေနွေးများဖြင့် ရွဲစိုနေသည်..။ရင်ထဲတွင်ကတော့ လမင်းတစ်ရာသာဆဲ..၊အပြင်မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်စမ်းဘာစေ..။ မီးထိပြီးပေါက်သွားသော ပုဆိုးမှ အပေါက်သည် (အချစ်ပေါက်) ပုဆိုးအောက်ပိုင်းတွင် စိုရွဲနေသော ရေနွေးတိုသည် (အချစ်ရေများ) တစ်ဖြင်းဖြင်းဖြင့် ပူလောင်လျှက်ရှိသော ပေါင်မှ မီးလှောင်ဖုသည် (အချစ်ဖု ) အားလုံးသည် အချစ်တို့ဖြင့် ပြည့်သိတ် ထုံမွန်းစွာ……၊ဆိုင်ရှင်အနားရောက်မလာခင်အထိ..၊ဆိုင်ရှင်အနားရောက်ပီး ကွဲသွားသောခွက်ဖိုးကို အလျှော်တောင်းမှပင် ကျနော် ချစ်ခြင်းအိမ်မက်မှနိူးသည်..။ ထိုစဉ်က ခွက်တစ်လုံးစာ လေးဆယ့်ငါးကျပ်ပေးလျှော်ခဲ့ရသည်.၊ ချစ်ခြင်း၏ အပြုံး တစ်ခဏသည် လေးဆယ့်ငါးကျပ်တန်ပါသည်..၊ ပေးစရာရှိသောပိုက်ဆံကိုပေး ဆိုင်ရှင်အားကျေနပ်အောင်တောင်းပန်ပြီး ကျနော်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့သည်..အချစ်ရေတို့ဖြင့် စိုရွဲနေသောပုဆိုးက လမ်းလျောက်ရန်အနှောက်အယှက်ပေးနေသည် ၊ ပုဆိုးမှ အချစ်ပေါက်ကိုလဲ လူမမြင်အောင်ဖုံးဖိထားရသည် ၊ ပေါင်မှ အချစ်ဖုကလဲ ပူစပ်ပူလောင်ရှိလှသည်၊ အဘယ်သို့်ပင်ဖြစ်နေပါစေ ကျနော့်ရင်ထဲတွင် ကြည်နူးရိတ်တို့ ပြန့်လွင့်လျှက်..၊ အချစ်ဘက်စ်ကားကြီး ကိုစီး ပြီး အချစ်အိမ်ကြီးသို့ ပြန်လိုက်ပါဦးမည်..၊
Posted by kohan at 3:56 AM 1 comment: Links to this post
ငါ့ အိမ် မှာ
ခေါင် ရွဲ့ ဘို့ အဆင်သင့်
ငါ့ အိမ်ကိုငါပြန်ခဲ့မယ် ပြန်ခဲ့မယ်...။
ငါပြန်ခဲ့ မယ် ပြန်ခဲ့မယ်.....
Posted by kohan at 3:59 PM2comments: Links to this post
ငါ အားအင်ပြည့်လာတဲ့ အထိ...
Posted by kohan at 3:55 PM No comments: Links to this post
အိပ်ရာပေါ်က ကြုံးရုံးထပြီး ပြောကြတယ်..
Posted by kohan at 3:53 PM No comments: Links to this post
ရာစုနှစ်ကြာမှ...ဒင်း က လေ ...
ဌာနေနဲ့အတူ ပြည့်တံဆာ ပိတောက်..
Posted by kohan at 3:51 PM No comments: Links to this post
တချို့က ကျနော့် အချစ်ပေါ်မှာ
အလကားကြေး လယ်ကွက်ပေါ်မှာ ..
တချို့က ကျနော့် အကြင်နာတရားနဲ့...
အဲလို အဲလို ပေါ့ချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ အချစ်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖော် မသူတော်....တဲ့
Posted by kohan at 3:47 PM 1 comment: Links to this post
ကိုယ်ရယ်... မင်းရယ်.. ချစ်ခြင်းရယ်....
ယဉ်ရထား က .....
ဘယ်လိုမှကို ခရီးမတွင်နိုင်ဘူး ခလေးရယ်.....။
မင်း က တခြား
လွမ်းခြင်း ကိုစားရင်းခေါင်း မူးတယ် ခလေးရယ်....
နောက်တစ်ခါ တို့တွေမဝေးတော့ပါဘူး လို့...
Posted by kohan at 3:44 PM 1 comment: Links to this post
ဂါဇာ မှာ ဗုံးပေါက်တာ
ပိုက်ဆံ နှစ်ထောင် ပါသွားပါရောလား..
Posted by kohan at 3:42 PM No comments: Links to this post
ငါသစ်ပင် တပင် ဖြစ်ချင်တယ်....
ငါ.....လူဖြစ်နေတာပဲကောင်းပါတယ် ။ ။
တခါ တခါ ကာရန်နဲ့ အိမ်ဆောက်မိတဲ့အထိပေါ့......
ဂါဇာ မှာ စစ်ပွဲရပ်သွားမယ်ဆိုရင်...
တခါ တခါ ကိုယ့်မှာ လက်ပါတာတောင်မေ့တဲ့အထိပေါ့
တခါ တခါ ချစ်သူကိုကုတ်င်္အကျီ လိုဝတ်ထားချင်မိတဲ့အထိပေါ့
ရောက်နေတဲ့နေရာမှာပျော်အောင်နေတာ ကောင်းပါတယ် နော်........
Posted by kohan at 3:35 PM No comments: Links to this post
ချင်ချင်း ကို တံတားထိုးပြီး
သင့်ချင်း ကို ထမ်းပိုးလို့....
ချင်ချင်း တံတားရယ် တောင့်ထားပါကွာ
ငါ ရောက်အောင်သွားမယ်........။ ။
Posted by kohan at 3:20 PM No comments: Links to this post
မသိခင်က စဉ်းစားရတာ ချာလည်ချာလည်.. သိလာတဲ့အခါ စဉ်းစားမှာပဲ သူဘာကောင်လဲ ငါဘာလဲ တွေ့သမျှဟာ ရုပ်သာဖွဲ့စည်း သိပီးသကာလ ရူပဗေဒမွေးဖွား၏ အီလက်ထရွန် ပရိုတွန် ညူထရွန် အက်တမ် တည်ဆောက် ကမ္ဘာအောက်မှာ ငါဆိုသည်ကား အသေးစားအမှုံ........
ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ဘလော့ဂ် တွေပါ ..
ဝက်ဝံလေး ရဲ့ စံမြန်းရာ